Sochii dargaggoota Biyyoolessaa, Bilisummaa fi Dimokiraasiif (SDBBD) National youth Movement For Freedom and Democracy (NYMFD) | QEERROO
Qeerroon bilisummaa Oromoo jijjiirama siyaasaa, dammaqinsa uummatni keenya keessa jiru kana fide ABOdhaan ijaaramee gaanfa Afrikaa kana keessatti qabatamaan cehumsa siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas kan dinagdee fidee jira. Jijjiiramni dhufee ture butame kun sirnaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa akka irraa fayyadamanitti Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamicha ABO kan tahe ijaarsa Mootummaa cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa ofitti fudhachuun wareegama barbaachisu kaffalee hojiitti ni hiika. Kanaafis Oromiyaa mara keessatti hiriirri nagaan deeggarsa Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa fi mormii bulchinsa PP Guraandhala 2021 irraa eegalee ni gaggeeffama.
Kanaaf, ilmaan Oromoo hiriira deeggarsaa seenaa qabeessa kan hidhamtootni siyaasaa hiikaman, nagaan waaraa lammiilee Oromiyaaf argamu, Oromoon biyya isaa irratti aangomfamu keessatti akka hirmaattan waamicha oromummaa kan isiniif taasisnu yoo tahu, dhaadannoon keenyas kan armaan gadiiti.
1. Mootummaan Cehumsaa hatattamaan haa ijaaramu
2. Hidhamtootni siyaasaa haa hiikaman
3. Ajjeechaa, dhiittaan mirga namummaa haa dhaabbatu
4. Duullii fi ololli maqaa Shaneen Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti gaggeeffamu haa dhaabbatu
5. Justice for Hachalu Hundesa
6. Nuti Qeerroo dha
7. Nagaa waaraa lammiilee
Kanneen jedhan dhageessisuun imaanaa gootota Oromoo bilisummaa lammiilee Oromiyaaf nu biraa wareegaman akka baanu waamicha dhiyeessina.